Ihe ntanetị 5 kachasị ewu ewu na ntanetị | ECommerce ozi ọma
Encarni Arcoya | | Ụzọ ịkwụ ụgwọ
Ọzọ anyị chọrọ ikwu ntakịrị banyere 5 usoro ntanetị ịntanetị kachasị ewu ewu na ugbu a ma enwere ike iji ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi iji kwụọ ụgwọ na-ahapụghị ụlọ.
1 1. Google obere akpa
3 3. Amazon ịkwụ ụgwọ
5 5. Nye ikike.Net
1. Google obere akpa
Ọ bụ ihe Ọrụ ịkwụ ụgwọ ntanetị nke Google nke ị nwere ike ịmefe ego na ịkwụ ụgwọ. Google mara ọkwa na nso nso a na ọ ga-enye kaadị anụ ahụ jikọtara na akaụntụ ndị ọrụ ka ha nwee ike iji Google Wallet na ụlọ ahịa mkpọsa.
Google Wallet dị na United States, ebe ị nwere ike iji ịntanetị kwụọ ụgwọ ịntanetị. Ihe ngwa a mere bụ ichekwa kaadị kredit na debit nke ị ga - eme dị ka onye nnọchi anya n'etiti onye ọ bụla kwụrụ ụgwọ na onye natara ego ahụ. Kedu ihe dị iche na ebe ndị ọzọ a na-akwụ ụgwọ, ebe ọ bụ na ha pere mpe, ebe ọ bụ na n'okwu a ozi gị (ya bụ, kaadị gị) ga-adị n'igwe ojii, n'enweghị nsogbu, ha agaghị ana gị ụgwọ ọrụ ọ bụla maka iji ya.
Ọtụtụ ndị nwere ike iche na Google Wallet dị ka Google Pay, mana eziokwu bụ na ọ bụghị. Ha bụ n'ezie ngwa abụọ dị iche iche dị iche iche.
N'okwu a, Google Wallet bụ n'ezie, dị ka aha ya na-egosi, obere akpa, nke pụtara na ị nwere ike ịnwe ego iji zipu, ma ọ bụ ịnata ego n'aka ndị enyi na ezinụlọ.
Ma, n'ihe banyere Google Pay, n'eziokwu a na-eji ngwa a akwụ ụgwọ na ụlọ ahịa, ọ bụghị na niile, mana ndị na-akwụ ụgwọ a site na ngwa ahụ.
N'ezie, iji ya, ị ga-edebanye aha na Google na akaụntụ nke ụlọ ọrụ a.
Para muchos, ihe nkwụnye ego n'ịntanetị maka ịdị mma, otu n’ime ihe ndị akacha eji n’ụwa niile nwere ihe karịrị nde iri na atọ na narị atọ na-arụ ọrụ na mba 137 yana ego iri abụọ na isii. Na PayPal ọ dị mfe ịzụta n'ịntanetị na-enweghị ịhapụ ụlọ, ọ nwere ngwa mkpanaka nke aka ya iji jikwaa ụgwọ niile site na ekwentị.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ nyiwe nkwụnye ụgwọ ndị ọzọ apụtala, PayPal ka bụ otu n'ime ihe ndị kachasị eji. N'ezie, ọ nwere ụfọdụ ọghọm (na ihe kpatara ọtụtụ gbanwere na nyiwe ndị ọzọ). Ma, ọ bụrụhaala na ịkwụ ụgwọ ahụ dị n’etiti ndị enyi, na n’otu mba ahụ, enweghị ọrụ ọ bụla, mana mgbe a bịara n'ịkwụ ụgwọ maka nzụta ma ọ bụ izipu ego na mpụga mba ahụ, enwere kọmitii na, mgbe ụfọdụ, ị ga-akwụrịrị ya ma onye na-ezipụ ma onye nnata.
N'ihi nke a, ọtụtụ na-ahọrọ iji usoro mgbaasị ọzọ.
Mgbe ọ pụtara, eziokwu nke inwe ike ịkwụ ụgwọ na-enweghị inye ụlọ akụ gị ma ọ bụ kredit ma ọ bụ debit kaadị nkọwa bụ ihe ọhụụ, mana naanị site na email gị karịrị nke iji jikwaa ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ izipu ego. Ya mere, ọtụtụ ndị na-eji ya.
Taa, kwa nwere ngwa iji jikwaa ịkwụ ụgwọ site na ekwentị na e nwere ọtụtụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na eCommerce na, n'etiti usoro ịkwụ ụgwọ ha, bụ PayPal (ọ bụ ezie na n'ọtụtụ ha na-eme ka ndị ahịa na-akwado ọrụ maka ịkwụ ụgwọ ahụ).
Ọzọ nke nnukwu uru nke PayPal bụ, n’enweghị obi abụọ, nkwado ndị ahịa ya. Ma ọ bụ na, ọ bụrụ na enwetaghị ngwaahịa ahụ azụrụ, ma ọ bụ nwee ihe merenụ, ma ọ bụ na ọ bụghị ihe a tụrụ anya ya, ha nwere ike ijikwa nkwụghachi nke ego ahụ. Ọ na-ewe obere oge, mana ọ bụrụhaala na ị na-eme ihe ziri ezi, ha ga-enyeghachi gị ihe ị kwụrụ.
3. Amazon ịkwụ ụgwọ
Ọ bụ usoro nchekwa ịntanetị dị mma ma dịkwa mfe iji, dịkwa oke mma maka ha kwesịrị ịnata ego site na iji Amazon API. Ndị ọrụ nwere ike izipu ego site na sistemụ Houselọ Akpaaka akpaaka, dị mkpa ma ọ bụrụ na ha nwere akaụntụ Amazon.
Nkwụ ụgwọ Amazon, ma ọ bụ nke amara ugbu a dị ka Amazon Pay, n'ụzọ ụfọdụ na-eso isi Paypal, ebe, kama iji email ma ọ bụ nkọwa ụlọ akụ gị, ihe ị ga-enye bụ naanị akaụntụ Amazon gị.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe ị na-eme bụ Amazon na-arụ ọrụ dị ka onye na-anọchite anya ya iji nwee ike ịkwụ ụgwọ ozugbo na ibe ịchọrọ (ma nabata usoro ịkwụ ụgwọ a, n'ezie).
Dị ka ọ dị na Paypal, e nwere ụgwọ na ụgwọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị debanye aha dị ka onye na-ere ere, enwere ọrụ maka azụmahịa ọ bụla a rụrụ (ihe ọtụtụ ndị na-eme bụ na ọ bụ onye ahịa na-akwụ ya, ma ọ bụ n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụ nke na-ezughị ezu).
Considerfọdụ na-atụle na ịkwụ ụgwọ Amazon bụ ihe mmepụta PayPal, na eziokwu bụ na ha adabaghị nke ọma. Mana ihe ikwesiri icheta bu na Amazon Pay ruru otutu ihe kariri PayPal ebe obu ugbua ndenye aha nke Amazon na-enye ohere usoro ugwo n'efu, nke bu ihe ozo.
Ọ bụ otu n'ime ndị na-asọ mpi nke PayPal na-enye ndị ọrụ ohere ịnyefe ego site na email, ekwentị mkpanaaka, Facebook, LinkedIn ma ọ bụ Twitter. Ihe na-eme ka ọrụ a mara mma bụ na enweghị ụgwọ ọ bụla maka inyefe n'okpuru $ 10, ebe maka ịnyefe karịa ọnụ ọgụgụ a, ego ahụ bụ naanị $ 0.25.
Ọzọ n'ime usoro ịkwụ ụgwọ ịntanetị kachasị ewu ewu taa bụ Dwolla, onye asọmpi nke na-agbaso ntọala nke Paypal. Ma ọ bụ na n'ọnọdụ a, ọrụ a dị iche na ndị ọzọ n'eziokwu na ọ dịghị mkpa iji kaadị akwụmụgwọ, ihe dị mkpa na ndị niile anyị gwara gị na mbụ.
A mụrụ ya na 2008 na Des Moines, Iowa, na United States, ọ bụ ezie na mmalite ya bụ na 2010.
Kedu ihe ị na-eji ma ọ bụrụ na ọ bụghị kaadị akwụmụgwọ? Ọfọn, ụlọ akụ. Ebumnuche abụghị ịdabere na kaadị kredit iji rụọ ọrụ na Internetntanetị, mana ịnweta ngwa ọrụ na-enye ohere ịkwụ ụgwọ ozugbo n'agbanyeghị na ịnweghị kaadị. Ma, dị ka ị maara, ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ site na mbufe ego, ruo mgbe enwetara ego ha anaghị amalite ịkwadebe usoro ahụ.
Nanị nsogbu ị nwere ike ịhụ na Dwolla bụ na ọ bụghị ọtụtụ azụmaahịa dị n'ịntanetị mara banyere ya ma ọ bụ jiri ya dịka usoro ịkwụ ụgwọ, yabụ na ọ nwere ike isi ike mgbe ụfọdụ iji ya.
5. Nye ikike.Net
Nke a online ịkwụ ụgwọ n'elu ikpo okwu na-arụ ọrụ kemgbe 1996 taa enwere karịa ndị ahịa 375.000 na-akwụ ụgwọ ihe karịrị $ 88 nde na azụmaahịa echekwara echekwa kwa afọ site na iji kaadị kredit na akwụkwọ elektrọnik.
Authorize.Net nwere nsụgharị abụọ dị iche iche, n'otu aka nweere onwe ya, na nke ọzọ na-akwụ ụgwọ mbipute, enwere ike ịzụta site na $ 25 kwa ọnwa. Otu n'ime atụmatụ iji gosipụta ihe nkwụnye ego a, bụ ịkwụ ụgwọ ịntanetị, na-enwe ike ịkwụ ụgwọ na kredit kaadị, yana elele elektrọnik na ọbụlagodi ịkwụ ụgwọ ekwentị.
Na mgbakwunye, ọ na-enye ọhụụ nke ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa na ịnyefe ego ma nye gị ohere ịchọpụta ma jikwaa azụmahịa iji guzobe ma ọ bụrụ na enwere nke ọ bụla nwere ike ịbụ aghụghọ ma ọ bụ na-enyo enyo.
Ọ nwere, dịka na nyiwe ndị ọzọ, a ndị ahịa na-arụ ọrụ oge awa 24 n'ụbọchị, ụbọchị 365 n'afọ. A na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa e-commerce, wdg. ebe obu na, n’etiti ndi mmadu, amachaghi ya dika ndi ozo.
N'ezie, o nwere nsogbu nwere ike ime ka ị họrọ ya, ma ọ bụ jiri ya. Ma ọ bụ na n'etiti ngwaọrụ ya bụ kọmputa, Apple na gam akporo, mana ọ dị naanị na United States, Canada, United Kingdom, Australia, China na India. Na mgbakwunye, ọ bụ ikpo okwu dị naanị na Bekee. Nke a na-egbochi ọrụ ya nke ukwuu ma ọ bụ ya kpatara na Spain, ma ọ bụ na Europe n'ozuzu ya, amachaghị ya (n'agbanyeghị na ọ bụ otu n'ime ndị kacha ochie).
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ụzọ ịkwụ ụgwọ » Ihe ntanetị 5 kachasị ewu ewu n'ịntanetị
Zaghachi Elena Alcántara
Amaara m nke ọzọ nke na-ewu ewu mana ọrụ ya dị oke mma! A na-akpọ ya Cardinity, ọ nwere ọnụahịa asọmpi na ndị ahịa ya na-elebara anya nke ọma na enyi na enyi. Nhọrọ kachasị ewu ewu abụghị mgbe kacha mma.
Gịnị bụ Amazon ịkwụ ụgwọ na otú ọ na-arụ ọrụ?